Chii chinonzi Brand? | Martech Zone
Chii chinonzi Brand?
Muvhuro, July 4, 2016 Chishanu, July 8, 2016 Douglas Karr
Dai ndaizobvuma chero chinhu nezve kushandisa makore makumi maviri ndichitengesa, zvaive zvechokwadi kuti ini handina kunyatsonzwisisa zvinoitika zve muchiso pane ese ekushambadzira ekuedza. Kunyangwe izvo zvingaite senge chirevo chisina musoro, imhaka yekuti nuance yekugadzira mhando kana kuedza kusimba mukugadzirisa maonero echiratidzo kwakanyanya kuomarara kupfuura zvandaimbofungidzira.
Kuti utore fananidzo, zvakaenzana zvingave muvezi anoshanda pamba. Muvezi anogona kunzwisisa kuvaka masvingo, kuisa cabinetry, kumucheto uye kudimburira, kuisa denga, uye kunyanya kuvaka imba kubva pahwaro kumusoro. Asi kana hwaro hwanga husipo-pakati kana kutsemuka, iye aizoziva kuti chimwe chinhu chakange chakanganisika asi asinganzwisise maitiro ekugadzirisa dambudziko Uye iro dambudziko rinokanganisa zvese zvaanoshanda pairi.
Chiitiko uye maonero echigadzirwa kana kambani ine rimwe zita, sekupihwa kuburikidza nemazita ayo anozivisa, magadzirirwo anotevera, uye manzwi anomiririra.
Ndosaka tichiwanzo kuunza vanachipangamazano muzviratidzo zvedu mazuva ano patinobvunza mibvunzo mishoma uye tisingakwanise kuwana mhinduro dzakajeka tisati tatanga kugadzira nzira dzekutengesa dzevatengi:
Iko kuratidzwa kunoonekwa kwechako chiratidzo kunoonekwa neako tarisiro nevatengi?
Ndiani mutengi mutengi uye mutongi-wesarudzo yekuita bhizinesi neako brand?
Chii chinokusiyanisa iwe nevanokwikwidza? Iwe unoonekwa sei uchienzanisa nevako vanokwikwidza?
Ndeipi toni yezvako zvemukati uye magadzirirwo anoshandiswa kunyatso kutaurirana kune ako tarisiro uye vatengi?
Kana iwe ukatarisa padyo nemibvunzo iyoyo, zvakanyanyisa kuderera nezve izvo iwe zvaunoda kugadzira uye nezvimwe nezve izvo zvaunogadzira zvinoonekwa. Sekutaura kwevhidhiyo, ndizvo zvinofungwa nevanhu nezvako pamwero wekunzwa.
Iyi vhidhiyo kubva Borshoff anobvunza uye anopindura mubvunzo mune ino vhidhiyo kubva makore mashoma apfuura pavakaenda kuburikidza nekumiswazve, Chii chiri muBrand?
Nekugamuchirwa kwakawanda kwemadhijitari enhau - anosanganisira enhau, zvipupuriro, uye zvemukati - zvigadzirwa zvine nguva yakaoma zvikuru kuchengetedza mukurumbira wavo, kugadzirisa mukurumbira wavo, kana kugadzirisa kugadzirwa kwavo. Zvese zvaunogadzira kana izvo zvinogadzirwa nemumwe munhu nezve zvigadzirwa zvako, masevhisi, kambani, uye nevanhu zvinokanganisa zita rako.
Tags: bokaborshoffmuchisokushambadziraKuzivikanwa kwechiratidzomuchiso mukurumbirabrandingchii chinonzi brand
Douglas Karr Monday, July 4, 2016 Friday, July 8, 2016
Machina Kudzidza uye Acquisio Kuchawedzera Sei Bhizinesi Rako